किन भयाे गाँजा खेतीमा प्रतिबन्ध ! — Bhaktapurpost.com
किन भयाे गाँजा खेतीमा प्रतिबन्ध !
नेपाल एक उर्वरभूमि भएकाे राष्ट्र हो । भौगोलिक बनावट अनुसार हावा पानी र माटो फरक भए सँगै भिन्न भिन्न किसिमका वस्तुहरु उत्पादन हुने गर्दछ । नेपालमा रहेको उर्वरभूमिलाई चिन्न सक्ने हो भने मुलुक यो समयमा आईपुग्दा सम्म गरिबीको रेखामुनी कमै मात्र नागरिक हुन्थे होला ।
तर, बिडम्वनाको कुरो त यो छ की आफ्नो देशमा उब्जाउ हुने बालीलाई अरु मुलुकले लागुऔषधको रुपमा प्रतिबन्ध लगाउँदा सहमती जनाउँदै हस्ताक्षर गर्न पुग्छन् । नेपालमा धेरै प्रकारका बस्तुहरु उत्पादन हुने उर्वरभूमिहरु छन् । जसको उपयोग आज सम्म राम्रो सँग हुन सकेको छैन । नेपालको उच्च हिमाली क्षेत्रमा उत्पादन हुने गाँजा खेती ०३३ सालमा संयुक्त राष्ट्रसंघको लहडमा लागेर गाँजा खेतीमाथि प्रतिवन्ध लगाइएको छ ।
२०३३, पछि लागूऔषध नियन्त्रण नीति, २०६६ र लागूऔषध नियन्त्रण रणनीति, २०६८ पनि बनेर कार्यान्वयनमा छ । यि सबैले नेपालमा गाँजा खेतीलाई अवैध भनेको छ । यि कानून र नीति, राणनीतिअनुसार कसैले पनि गाँजा, चरेस र अफिम खेती कसैले लगाएको खण्डमा जरिवाना बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारी निकायबाट अभियान नै चलाएर गाँजा खेती नष्ट गर्ने कार्य हुँदै आएपछि गाँजा उत्पादन क्षेत्रको उर्वरभूमि खेर गैरहेको छ । गाँजा उत्पादन हुने क्षेत्रमा अरु खाद्यवस्तुको उत्पादन राम्रो हुदैँन ।
कृषिमा प्रविधि र जडीबुटी उत्पादनमा सरकारले नजर लगाउने हो भने व्यापार घाटामा कहीहत सम्म कम गर्न सकिन्छ । अहिले गाँजाको विषयले प्रतिनिधिबैठकमा समेत ठाउँ पाएको छ । केही सांसदहरुले गाँजा उत्पादनमा खुला गर्नुपर्ने आवाज उठाएका छन् । देश र नागरिक दुबैको हितमा प्रचलित कानूनले प्रतिबन्धित लागूऔषधको सूचीमा राखेको गाँजा खेतीलाई प्रोत्साहन साथ फुकुवा गर्न आवश्यक देखिन्छ ।